Totinahaam Siitiin wayi mufachiisaa laata? - BBC News Afaan Oromoo
Totinahaam Siitiin wayi mufachiisaa laata?
Tibba darbe kessatti Tootenhaam Maancheesteer Sitii irraa qabxii afur fudhatee ture - gareen kun osoo hin mo'amiin deemaa jiruu Peep Gaardiyoolaa dhaabuu danda'uu laata?
Oggeessa kubba miilla BBC Ispoortiitti Maark Laawreensan 1-1 walqixa bahu jedha -itti waligaltaa?
Torbee kana keessa Laawroon, oggeessa kubbaa miillaa ta'uu isaa nama hinfudhanne Akteraafi WWE cimaa kan ta'e Joon Seenaa kaaseeti.
Seenea BBC Ispoortiitti akka himetti: ''Yoo taphataa miillaa beekamaa maqaa dhahii jedhamee, Kiristiyaanoo Roonaaldoon jalqabeen isumaan xumura. Kanumaa.
Leesisteeriifi Kiristaal Palaas (3:30 wb)
Kiristaal Palaas haala gaariirra jira. Taphoota ja'a taphate keessattis hinmo'amin jira - garuu tibba kana keessa dirre morkattoota isaanii kessatti goolii argachuu qabu, Leesisteer wayita ammaatti Pirimeer Liigii keessatti warra sadarkaa duraarra jiran keessa tokko.
Erga Leesiisteer garee isaa duraanii Saawuuzampiteniin Roobii injifatee booda Pu'eel kabajamaa guddaa argateera.
Tilmaama Laawroo: 2-0
Tilmaama Seenaa: 0-1
Milkaa'insa dhabuyyu Raafaa Beniiteez jijjirraa fiduuf carraaqaa ture. Haalli akkuma duritti jira, akkuma beekamu mo'amuudha - taphoota saddeet tibba darbe xaabatan irraa qabxii tokko qofa argachuun gara warra diviziioonii gajjallaatti bu'an ta'anirru.
Arseenaal ammoo taphawwan sadii darban keessatti qabxii lama gatee jira.
Kana ilaaluun akka tilmaamakootti Arseenaal Niiwuukasiliin ni mo'ata kanan jedhuuf.
Tilmaama Laawroo: 3-0
Taphoota ja'a darbanirraa Biraayiten qabxii lama qofa argate - taphoota sana keessaas tapha afur irratti qabxii argachuu hindandeenye.
Wayita ammaatti akkuma beekamu Barnileey haala gaarirra jira, sadarkkaa ja'affaadha.
Tilmaama Laawroo: 1-1
Tilmaama Seenaa: 0-0
Jalqaba XI irratti taphataa sarara duraa beekama yoo hin qabannellee Cheelsiin Kibxata Haadersifiild'tti qabxii gaarii ta'e argachuun injifatamuu Weesti Haamiin irra gahee tureef deebi keenneera.
Saawuzampiten tapha Arseenaalii waliin xumura torbee darbee godheerratt gaarii ta'e haa mul'atu malee Roobii Leesiisteriin mo'ameera.
Warrii Seeyintiis tapha Liigii sadeet daban keessaa tokko qofa injifatee, Sitaanfoordi Biriijiittis qabxiin foyyaa'aa ta'e hin eegamu.
Tilmaama Laawroo : 2-0
Tilmaama Seenaa: 0-2
Istookiifi Weestt Haam
Cheelsii injifachuun akkasumas Arseenaal waliin qixa bahuun Weesti Haam qabxii argachuu jalqabeera.
Taphoota shanan darban keessa afuu kan mo'ame Istook, wayita ammaatti miira gaariin haalli itti dhageesisu hinjiru - Ogganaan Pooteersi Maarki Hawuusis yeroo dheeraaf waan ogganaa tureef kan duraanii caalaa dhiibbaa jala jiraachuu mala.
Taphoota darban sadi keessatti Waatfoordi qabxii lamaan gad bu'eera garu tapha Haadersifiildi waliin godhan irratti haalli walfakkaataan ta'a jiraachuun isaa natti hinmul'atu.
Warri Teeriirsi tibba kana keessa erga boodatti deebiyaanii booda qabxii argatan tokkollee hinqaban - hanga ammaatti tapha tokko qofa mo'atan innis kan gaafa baniinsaa Kiriistaal Palaas waliin turedha.
Tilmaama Seenaa: 1-0
Maanchisteer Sitiifi Tootenhaam (8:30wb)
Asirratti gareen Maarsiyoo Poochetiinoo ifa of godhanii Tootenhaamiif baay'ee barbaachissaadha. Isparsi taphoota gurguddoo isa jalatti taphatan, keessatuu taphoota dirree isaanii alaa keessatti qabxiin argatan baay'ee dadhabaa ture; taphoota 17 keessaa tokko qofa mo'an.
Sitiin haala baay'ee gaariirra jira, Tootenhaamis bakka isaanitti ol of qabanii turuuf akka gaariitti taphachuutu irraa eegama - akkan yaadutti gareen kunneen kan ni taasisu.
Tilmaammii Seenaa: 0-1
Weesti Biroomiifi Maanchisteer Utd (05:15 wb)
Ogganaan haaraan Weesti Biroom Alaan Paardiwu ammayyu injifannoo isaanii isa jalqabaa eegataa jiru.
Dilbata dhufu dirre ofiirratti waan taphataniif caalaa itti mudduun taphatu - Yunayitidiif waanti mijataan yeroo ulaa argatan aleelu.
Tilmaama Laawroo: 0-2
Boornmaawuziifi Liiverpuul (7:30wb)
Liiverpuul taphoota Everteniifi Weesti Biroom waliin godhe keessatti qabxiilee qabu waan gateef isaaf torbee gadhee ture.
Boornimaawuzilleen haala rakkisaa keessa turan, raawwii isaan agarsiisaa turan baayyee gadi aanaadha.
Haala kamiiniyyu taphni kun Liiverpuuliif tapha sirriidha, sababiinsaas Boornimaawuzi gadi hin taa'an. Gara warrii Diimolee kanatti ka'aachuu malu; kunimmoo garee Kilooppiif akka qabxii argatan taasisa.
Everteniifi Siwaansii (11:00wb)
Everten garee qabxii olaanaa qaban keessa kan jiru wayita ta'u Siwaansiin ammallee wal'aansoorra jira.
Waaynii Ruuniin wayita akka gaariitti Toofeef taphatu arguun gudda namatti tola. Taphataa cimaan Siwaansii kan ta'e Gylfii Siguurdsanis akkuma isaa durii fakkaata..
Tilmaama Seenaa: 0-1ata